Taom-baovao Malagasy karakarain’ny Trano Koltoraly Any Miarinarivo ny hanokafana azy ny 04 Aprily
Mihamahazo vahana hatrany ny fanatontoloana eto amintsika. Betsaka ireo voka-tsoa azo avy amin’izany nefa misy ihany koa ireo voka-dratsy.
Lejim 415 Hikalo ny tsy fankasitrahany ny « poupée sexuelle »
Rahampitso alina 15 martsa no hahitana ny seho miavaka iarahana amin’ny tarika Lejim 415, etsy amin’ny restaurant le Menabe Ivato.
Mpanakanto SHYN Voatendry ho ambasadaoron’ny Airtel
Taorian’i Stephanie dia voatendry ho ambasadaoron’ny Airtel vaovao indray Shyn na i Bejean Prospere ilay mpanakanto tsy zoviana amin’ny maro intsony
Taombaovao Malagasy eny Ambohidrabiby Niainga avy amin’ny fomba isam-paritra, hoy ny mpikarakara
Mbola mametraka adihevitra ihany na dia efa ho 20 taona aza izao ny fotoana tokony hankalazana izany taombaovao malagasy izany. Raha ny daty nomen’ny avy eo anivon’ny Trano koltoraly tetsy amin’ny Arrupe Faravohitra omaly dia 5 sy 6 aprily izao no hankalazana izany eny amin’ny rovan’Ambohidrabiby.
Kolontsaina Malagasy Mampanahy ny hoaviny
Fanarenana ny rova, mpanao hatsikana malaza lasa tale jeneraly misahana ny kolontsaina, fanapahan-kevitry ny minisiteran’ny kolontsaina manoloana ny fiparitahana horonantsary tsy mifanaraka amin’ny soatoavina Malagasy.
Afaka hiroso amin’ny famokarana sarimihetsika avy hatrany ity orinasa ity ato ho ato, satria voafantina tao amin’ny tranompokonolona Mahitsy tamin’ny alahady 7 sy alatsinainy 8 oktobra teo ireo ho mpilalao hiara-kiasa aminy ka nandraisana sokajin-taona rehetra, araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny orinasa, Maminiaina Johnny Rakotondranaly. Nomarihiny koa ny nampirisihana manokana ireo mpisehatra vao hofolahana, handray anjara tamin’ny fifantenana ary nisy mpanakanto amin’ny hira madinika koa nofidiana ho mpilalao ho fiatrehana ny mety hisian’ny filana ara-mozika ao anatin’ny sanganasa vokarina. Hahaforona asa maromaro ao amin’ny faritra misy azy, noho izany, ity Métatron production ity, satria homena fiofanana amin’ny lafiny maro ireo voafantina izay ho mpilalao raikitra ao amin’ny trano famokarana. Misokatra amin’ny fiaraha-miasa marolafy ary misandrahaka amin’ny asa isan-karazany izy ity mba hampananana antoka ara-pivelomana ireo ao anatiny.